ဝက်သားဒုတ်ထိုး(၅၀)တန်တွေပျောက်ဆုံးနေချိန် ရှားရှားပါးပါး(၅၀)ကျပ်ကစပြီးစားနိုင်မယ့်ဆိုင်လေး – FoodiesNavi
By yin sandi On August 16, 2018 0
ဝက်သားဒုတ်ထိုးစားတိုင်း တစ်ဆိုင်နဲ့တစ်ဆိုင် တစ်ချောင်းကို(၅၀) ၊ (၁၀၀)လောက်ပဲကွာပေမယ့် အပြုံလိုက်ကြီးစားတဲ့အခါကျ သိပ်သိသာတာပဲရယ် ? ဒီတော့ ဝက်သားဒုတ်ထိုးဆို ကောင်းသန့်ပြီး ဈေးချိုချိုစားနိုင်မယ့် ဆိုင်လေးတွေလိုက်ရှာရင်း ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ကို သဘောကျမိသွားလို့ ဈေးတန်ပြီးကောင်းတာမှစားချင်ကြတဲ့ အစားတစ်လိုင်းတွေအတွက် မင်မင်ထပ်မံတွေ့ရှိထားတဲ့ ဆိုင်လေးအကြောင်းညွှန်းပေးဦးမယ်ကွယ်။ ဆိုင်လေးက မြို့လည်ခေါင်မှာဆိုတော့ ရှာရလွယ်မှာပါ။
(၅၀)ကျပ်ကစတဲ့ဆိုင်ဆိုတော့ ဆိုင်ခန်းနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးရယ်။ လမ်းဘေးဆိုင်လေးပေမယ့် လုံးဝလျှော့တွက်လို့မရတဲ့ဆိုင်လေးပါ။ ? ဝက်အူတွေအစက သန့်သန့်ပြန့်ပြန့်လေးနဲ့ ဝက်အသွေး ၊ အသည်း ၊ အသား ၊ လျှာ ၊ နားရွက်စုံနေအောင်ရတယ်။ တစ်ခုတစ်ခုဆိုလည်း အကြီးကြီးပဲဆိုတော့ ခံတွင်းထဲမှာအပြည့်ပဲရယ်။ အသားတွေကနူးနူးအိအိလေးနဲ့ အရသာကလည်းအပိုအလိုမရှိဘူး။ ဟင်းရည်အရသာလေးလည်း တော်တော်ကောင်းသလို အချဉ်ရည်စပ်ထားတာလည်း မိုက်ချက်ပဲကွယ်။
(၂)ထောင်ဖိုးလောက်စားရင်တောင် ဗိုက်ကိုတင်းကားနေအောင်စားလို့ရတယ်။ ဆိုင်ရှင်ဦးလေးကြီးကလည်း သဘောကောင်းတော့ စားရတာပိုမြိန်ချက်ပဲ။ အသားတွေကြည့်ရုံနဲ့တင်လတ်ဆတ်သန့်ရှင်းမှန်းသိသာတော့ စိတ်ဖြောင့်ဖြောင့်စားလို့ရတယ်ရယ်။ ဆိုင်နေရာလေးကတော့ မဟာဧမာနွေလဘုရားကျောင်းရှေ့ ဗန္ဓုလပန်းခြံဘေးလမ်းကဝင်သွားလိုက်ရင် ဈေးဆိုင်တန်းလေးတွေရှိပါတယ်။ သိပ်ရှာစရာမလိုဘဲ အလွယ်တကူတွေ့နိုင်မှာပါနော်။
ငါးရဲ့ချိုမြမှုတွေကို ချဉ်ငံစပ်အရသာနဲ့ တွဲဖက်ခံစားရမယ့် ထားဝယ်မုန့်လက်သုပ်လုပ်နည်း